Resaky ny mpitsimpona akotry : mbola santionany fotsiny | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : mbola santionany fotsiny
Lasa resabe ny ranomason-dRamatoa Ministry ny Mponina, ao ny mpamendrofendro niray hina taminy nisentosento avokoa, eo andaniny koa ireo mpitsikera naneho esoeso. I ramatoa Minisitra moa dia manana ny lazany manokana, fantatry ny be sy ny maro nohon’ny hakingan’ny vavany teo am-panaovana ny asany teo aloha tamina televiziona manana ny toerany manokana eto andrenivohitra, fa tsy nohon’ny asa vita tena nandaitra nampiavaka azy manokana hatramin’izay nandraisany anjara ao amin’ny governemanta. Ao anatin’izany governemanta izany, mafy amin’izao fotoana izao ny tsindry avy atsy sy aroa, rera-tsaina ireo minisitra ka mety ho marivo ranomaso, mora foana ny famelana an’izany itobaka raha toa ka tiana ampiasaina amin’ny fanaovana pôlitika. Nanao ahoana raha toa lehilahy no latsa-dranomaso toy ireny ? Ireny tranga ireny ve dia manondrotra sa manetry ny hasin’ny vehivavy eo amin’ny fiantsorohana adidy ambony apetraka aminy. Samy manana ny fitazany an’izay. Tsy fanaovana atsikana ny sehatra fanatanterahana ny raharaham-pirenena, na izany aza manambana hivadika ho sehatra tolona tena izy tsy misy fitsaharana.
Ireny mipoitra tsikekikely ny fanambarana ny fanapahan-kevitra filatsahana amin’ny fifidianana 2018. Ny tetikady ho raisina moa no mahatonga ny sasany isalasala, sao lasa aloha na koa mety ho diso ariana ? Any amin’izany 2018 izany daholo ny eritreritra, ho an’izany avokoa no mivondrona ny ezaka. Kely sisa ny anjara atokana ho an’ny fanantaterahana ny raharaham-pirenena ! Eo amin’izany ady saritaka anjakan’ny fandripandrika sy fingapingana izany dia tsy mitsahatra koa ny tetika maloto fiarovan-toerana ho an’ny sasany, fanonzongozona ho an’ny hafa. Mialoha mantsy dia samy mahafantatra fa tsy tena fifaninana madio ny fifidianana, izay mahazo tosika avy amin’ny fampiasana ny herim-pahefana dia manana tombon-dàlana tsy hita ho hamaivanina.
Raha izany fitrangan’ny fanaovana pôlitika izany no dinihana dia lany eo ny andron’ny dimy taona. Ny roa taona vaolohany dia mitsapatsapa ny fanovana asa, niaraha-nahita izany. Raha vao mipaika anefa ny atsasam-potoana voafetra dia samy efa maka bahana iatrehana ny dingana manaraka. Veloma teo ra-Fanovàna, eo ampototry ny fifidianana indray no hanaovantsika fanomezan-toky sy programa momban’izany.